သံမဏိဘူးဖွင့်စက်ထုတ်လုပ်သူများ - တရုတ်စက်ရုံ - ZHAOQING CITY YUYA METAL PLASTIC PRODUCTS CO ။ , LTD
နေအိမ် > > ပုလင်းဖွင့်ပွဲ > သံမဏိပုလင်းဖောက်တံ
သံမဏိပုလင်းဖောက်တံသည်လက်ဆောင်တစ်ခုသို့မဟုတ်နေ့စဉ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးကောင်းလက္ကားသတ္တုသံမဏိပုလင်းဖောက်တံမဖွင့်ပါစိတ်ကြိုက်လိုဂို plating မပါဘဲ
အရည်အသွေးကောင်းလက္ကားသတ္တုသံမဏိပုလင်းဖောက်တံမဖွင့်ပါစိတ်ကြိုက်လိုဂို plating မပါဘဲ
ဒီဇိုင်း 2D သံမဏိပုလင်းဖောက်တံ၊ ဘေးဘက်တံဆိပ်တစ်ခု
စိတ်ကြိုက်အမှတ်တံဆိပ်သည်သံမဏိထွင်းခြင်း / သံမဏိပုလင်းဖောက်တံတွင်ပုံနှိပ်နိုင်သည်။ ရိုးရှင်းဒီဇိုင်းပေမယ့်အလုပ်လုပ်တဲ့!
အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိသံမဏိပုလင်းဖောက်တံကိုအမှတ်တရပစ္စည်းများ၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးလက်ဆောင်များ၊ အလှဆင်ခြင်းများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အရည်အသွေးမြင့်သော brush သံမဏိဆောက်လုပ်ရေး
၀ န်ဆောင်မှုအဆင့်မြင့် / သံမဏိပုလင်းဖောက်တံ၏အရည်အသွေးမြင့်မားသည်
1. Q: သံမဏိပုလင်းဖောက်တံ မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်ထုတ်ကုန်များကိုသင်ထုတ်လုပ်နိုင်သနည်း။
Kotar: ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်အမည်တံဆိပ်များ၊ တံဆိပ်များ၊ တံဆိပ်များ၊ သံမဏိပုလင်းဖောက်တံ၊ ခါးပတ်ကြိုး၊ cufflinks၊ လည်စည်းညှပ်ပုလင်းဖောက်တံ၊ ငွေကလစ်၊ ကားအထိမ်းအမှတ်၊ ခွေးတံဆိပ်များ၊
3. Q: အရည်အသွေးနိမ့်သောသံမဏိပုလင်းဖောက်တံကိုကျွန်ုပ်လိုချင်ပါကမည်သို့ဆောင်ရွက်မည်နည်း။
Hot Tags: သံမဏိဘူးပုလင်းဖွင့်စက်၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်စျေးပေါ၊ အနိမ့်စျေး၊ စျေးနှုန်း၊ စျေးနှုန်း၊